कस्तो छ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको स्वास्थ्य अवस्था ? — Imandarmedia.com
कस्तो छ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको स्वास्थ्य अवस्था ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल भर्ना भएकै दिनदेखि सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि घर बाहिर निस्किएका छैनन् । ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात गत मंगलबार शिक्षण अस्पताल पुगेका प्रचण्ड त्यसयता कतै ननिस्किएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
प्रचण्ड ओलीलाई भेट्न अस्पतालमा आउँदा पनि सामान्य रुघाखोकी लागेको देखिएको अ‍ोलीको सचिवालयका सदस्यहरुले बताए । त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । मिर्गाैला पुनः प्रत्यारोपणपछि अधिकांश नेताहरु अस्पताल गए पनि प्रचण्ड भने घरमै आराम गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
रुघाखोकी र सामान्य ज्वरो आएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भेटघाट पनि कम गरेका छन् । केही नेताहरुसँग र निकटस्थहरुसँगमात्र उनले भेटघाट गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नेकपाले प्रदेश भेला लगायत पार्टीका सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गरेकाले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा जानु नपरेकाले उनी आराममा बसेका हुन् ।
प्रचण्ड निकट एक नेताले भने ‘उहाँ विरामी परेर सुत्नुनै भएको चाहिँ होइन तर अहिले सार्वजनिक कार्यक्रमहरु पनि नभएका र पार्टीका भेलाहरु पनि स्थगित गरिएकाले आराम गर्ने मौका मिलेको हो । यद्यपी कतिपय भेटघाट र छलफलहरु रोकिएका छैनन् ।’
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिर्गौला दान दिने उनकी भान्जी समीक्षा सङ्ग्राैलाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहाना व्यक्त गरेकी छिन । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले आइतबार बिहान भेट्न जाँदा सङ्ग्राैलाले ‘मामालाई कस्तो छ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई एक पटक भेट्न चाहेको इच्छा व्यक्त गरेकाे बताएका छन्।
जवाफमा राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तपाईं पहिलो ‘भिजिटर’ हुने भनेर आफूले सङ्ग्राैलालाई भनेको ट्विटरमा लेखेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रिज्युलाई मिर्गौला दानदिने भान्जी समिक्षा संग्रौलालाई सोधें-कस्तो छ? मलाई त ठीक छ, मामालाई चाँहि कस्तो छ?एकपटक मामालाई भेट्न मन लागेको छ। मैले भने- तपाई पहोलो भिजिटर हुनुहुनेछ।आफ्नोभन्दा प्रमको स्वास्थको चिन्ता लिने उहाँको भावनाप्रति सम्मान प्रकट गर्दै वार्डबाट बहिरिए।’ उनले ट्वीट गरेका छन् ।
आफ्नोभन्दा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको चिन्ता लिने उनीप्रति आफूले सम्मान प्रकट गर्दैै सङ्ग्राैला भर्ना भएको वार्डबाट निस्किएको रिमालले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् । गएको बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य लाभ गर्दैछन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दाहिने मिर्गौला दान गरेकी सङ्ग्राैलाको स्वास्थ्यमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ ।